Somali News 06.21.21 | KWIT
Heerka waxtarka ee 14-ka maalmood waa 2% gobolka oo dhan, iyo heerka toddobada maalmood ee waxtarka leh waa 1.9%.
Qiimaha 7-maalmood ee Degmada Woodbury waa 1% iyadoo 5 kiis lagu daray usbuucii la soo dhaafay. Taasi waa sida laga soo xigtay macluumaadka websaydhka coronavirus. Dhowr degmo oo ka tirsan Siouxland ma muujiyaan kiisas ama heerar infakshan. Waxay kala yihiin Monona, Ida, Cherokee, Buena Vista, Lyon, O’Brien, Osceola, Emmett, iyo Pocahontas. Si kastaba ha noqotee, heerka tijaabada ee 7-maalin ee Sioux County waa 10% iyo Plymouth 4%. Gobolka Sioux wuxuu ku daray todobo kiis usbuucii la soo dhaafay.
Warbixin sanadle ah oo ay soo saarto Annie E. Casey Foundation ayaa Iowa kaalinta sagaalaad uga gashay guud ahaan fayoobaanta ilmaha.
Warbixinta The Kids Count ayaa darajaynaysa dawladaha fayoobaanta dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo sidoo kale qoyska iyo bulshada.
Qareenada ayaa sheegaya in kastoo Iowa uu ku jiro darajo sarre, haddana waxaa jira hawlo badan oo u baahan in laga qabto carruurta iyo qoysaska.
Warbixintu waxay ku talineysaa in si joogto ah loo ballaariyo amaahda canshuuraha ee dowladda federaalka iyo in la xoojiyo siyaasadaha gobolka iyo deegaanka ee saameynaya qoysaska.
Waaxda Iowa ee Kheyraadka Dabiiciga ah ayaa rajeyneysa inay ku kordhiso dib-u-warshadaynta gobolka oo dhan olole cusub "I am a Recycler Campaign"
Dib-u-warshadayntu waxay jirtay muddo 40 sano ah, laakiin saraakiisha ayaa dhahay weli kuma dhicin weli awooddeeda buuxda.